आम्बाको सही प्रयोगले तपाईको झाडापखला रोक्ने देखि लियर क्यान्सरबाट पनि बाचाउछ अब कसरी ? – Krazy NepaL
November 2, 2020 779
सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो, अम्बा एक मीठो फलको रूपमा चिनिने गर्दछ। अम्बामा पाइने थुप्रै गुणकारी तत्वले मानिसको स्वास्थलाई धेरै फाइदा हुने गर्दछ। अम्बामा पाइने भिटामिन सी, लाइकोपिन र एन्टीआक्सीडन्टहरूले छालाका लागी लाभदायक हुन्छ। अम्बामा रहेको पोटासियमले रक्तचापकोस्तरलाई सामान्य बनाउन मद्दत गर्दछ। यसैगरी, यसमा ८० प्रतिशत पानी र उच्च फाइबर भएकाकारण तौत घटाउन पनि सहयोग गर्दछ। यी सबै त भए अम्बाका फाइदाहरु तर, के तपाईंलाई थाहा छ अम्बाको पातहरु पनि स्वास्थका लागि बहुउपयोगी हुन्छ भनेर ? अम्बाका पातहरु मेक्सिको तथा दक्षिण अमेरिकाको केही भागहरूमा परम्परागत औषधिकोरुपमा प्रयोग गरिन्छ। उक्त ठाउँहरुमा अम्बाका कलिला पातहरुको चिया बनाउने गरिन्छ जसमा भिटामिन सी, क्वेर्सेटिन र एन्टिअक्सिडेण्ट प्रशस्त मात्रमा पाइन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevचिसो मौसममा किसमिस खानुको अचुक फाइदा नै फाइदाहरु यस प्रकार छन्
Nextसामाजिक संजालकी रानी नायिका अदिती वुढाथोकीको १२ बोल्ड तस्बिरहरु